Moqups: Ronga, Dhizaini, Prototype, uye Batira pamwe neWireframes uye Zvakadzama Kufamba | Martech Zone
Rimwe rebasa rinonakidza uye rinogutsa iro randaive naro raishanda semaneja wechigadzirwa webhizimusi SaaS chikuva. Vanhu vanokoshesa maitiro anodikanwa kuti ubudirire kuronga, dhizaini, prototype, uye kubatana pane zvidiki zvidiki mushandisi interface shanduko.
Kuti ndironge chidiki chidiki kana mushandisi chinongedzo shanduko, ini ndaizobvunzurudza vanorema vashandisi vepuratifomu mune mashandisiro avanoshandisa nekudyidzana nepuratifomu, kubvunzurudza vanotarisira vatengi kuti vangashandisa sei chimiro, kurukura sarudzo nezvikwata zvekuvakisa uye kumberi- end vagadziri pazviitiko, wobva wagadzira uye kuyedza prototypes. Maitiro acho aigona kutora mwedzi yakati waya faira risati rapfuura nepakati kugadzira. Sezvo zvaive zvichikudziridzwa, ini ndaifanirwawo kutora mockup zvidzitiro zvemagwaro uye kushambadzira kwechigadzirwa.
Kuve nepuratifomu yekukudziridza, yekugovana, uye yekushandira pane mockups kwaive kwakanyanya kutsoropodza. Ndinoshuva dai tanga tine chikuva icho chiri nyore uye chinoshanduka senge Moqups. Iine online mockup uye wayaframe chishandiso seMoqups, timu yako inogona:
Kurumidza Kuita Kwako Kugadzira Maitiro - Shanda mukati meyechete mamiriro ekugadzira kuti uchengetedze kutarisisa kwechikwata chako uye nekumhanyisa.
Sanganisira Vose Vanobata - Vane Chigadzirwa Mamaneja, Bhizinesi Vaongorori, Masisitimu Aratidziro, Vagadziri neVagadziri - kuvaka kubvumirana uye kutaurirana zvakajeka.
Shanda uri kure mugore - chero nguva uye pane chero chinhu - pasina kunetsekana kurodha pasi uye kurodha pasi mafaera.
Ngatitorei rwendo rwekukurumidza rwe Moqups.
Dhizaini - Fungidzira Yako Pfungwa
Fungidzira, bvunzo, uye simbisa pfungwa dzako nekukurumidza waya mafirita uye zvakadzama mockups. Moqups inoita kuti bhizinesi rako riongorore uye riwedzere apo timu yako inovaka kukurumidza - kufamba zvisina mutsindo kubva ku-lo-fi kuenda ku hi-fi sezvo chirongwa chako chinoshanduka.
Ronga - Gadzira Pfungwa Dzako
Tora pfungwa uye upe mafambiro kumapurojekiti ako nematuru edu ekugadzira dhizaini. Moqups zvakare inoita kuti iwe ugadzire sitemaps, flowcharts, storyboards - uye svetuka zvisina basa pakati pemadhirama uye dhizaini yekuchengeta rako basa riwirirane.
Prototype - Ratidza Basa Rako
Gadzira inoshanda prototype nekuwedzera kusangana kune ako magadzirirwo. Moqups inobvumira vashandisi kuteedzera ruzivo rwevashandisi, kuvhura zvakavanzika zvinodiwa, kutsvaga zvakafa magumo, uye kuwana kusaina kwekupedzisira kubva kune vese vane chekuita usati waisa mari mukuvandudza.
Shandira pamwe - Kutaurirana Mune Chaiyo-nguva
Chengetedza munhu wese pane iro chete peji, uchipa mhinduro padanho rega rekugadzirwa dhizaini. Inzwa mazwi ese, funga sarudzo dzese - uye simbisa kubvumirana - nekugadzirisa mune chaiyo-nguva uye kupindura zvakananga pane zvakagadzirwa.
Moqups ine yakazara ecosystem yezvishandiso mukati meimwe dhizaini nharaunda, inosanganisira:
Dhonza uye udonhedze zvinhu - Kurumidza uye nyore kubva kune yakazara raibhurari yemawadhi uye akachenjera-maumbirwo.
Yakagadzirira-kushandisa Stencils - Sarudza kubva pane yakasangana yakasanganiswa stencil kits kune ese mafoni-app uye webhu dhizaini - kusanganisira iOS, Android, uye Bootstrap.
Icon Raibhurari - Yakavakwa-muraibhurari nezviuru zveyakakurumbira Icon Sets, kana sarudza kubva Font Awesome, Chinyorwa Dhizaini, uye maHawoni.
Tumira Mifananidzo - Isa zvakagadzirwa zvakagadzirwa dhizaini, uye nekukurumidza zvishandure zviite zvekudyidzana prototypes.
Chinhu Chinogadzirisa - Resize, tenderera, enzanisa uye dhizaini zvinhu - kana shandura zvinhu zvakawandisa nemapoka - zvine smart uye zvine simba maturusi. Yakawanda-gadziridza, rename, kukiya, uye zvikamu zveboka. Dzorera kana kuitazve pamatanho akawanda. Kurumidza kuziva zvinhu, famba nepakati pemapoka akavezwa, uye shandura kuoneka - zvese zviri mukati mePuratifomu yePaneru. Gadzira chaiyo kugadzirisa ne grid, vatongi, tsika-magwara, snap-kune-grid, uye nekukurumidza-kurongedza maturusi. Chiyero, pasina kurasikirwa kwemhando, iine vectorial zooming.
Font Raibhurari - Sarudza kubva kumazana esarudzo yemafonti akabatanidzwa maFonti eGoogle.
Peji Management -Simba, inoshanduka-shanduka, uye inotyisa Peji Management. Dhonza uye udonhedze mapeji kuti akurumidze kuagadzirisa - kana kuaronga mukati memafolda. Viga mapeji kana maforodha - izvo zvisina kunyatsogadzirira nguva yekutanga - nekungobaya chete mbeva.
Master Mapeji - Sevha nguva nekumisikidza Master Mapeji, uye otomatiki shandisa chero shanduko kune ese anoenderana mapeji.
Atlassian - Moqups ine rutsigiro runowanikwa kuConfluence Server, Jira Server, Confluence Cloud, uye Jira Cloud.
Vanopfuura mamirioni maviri vanhu vatove kushandisa Moqups yeapp uye webhusaiti prototyping uye wayaframing!
Gadzira YEMAHARA Moqups Akaundi
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we Moqups uye ndiri kushandisa zvinongedzo zvangu muchinyorwa chino chose.
Tags: dhizaini yekushandisaapp simulationkubatsiranamazanomadhayagiramumugeramockupmoqupschigadzirwa manejimendizvinyorwasimulationmabhodhi enhauuiuser experienceuser interfacekuonawebhu dhizaini dhizainiwebsite web designwaya